डा रोजिना भट्टराई
सानो उमेरका मानिस हुन् या ठूलो उमेरका, दाँतको उपचार भनेपछि सबैको मनमा एक खालको डर सिर्जना हुन्छ। डर नलागोस् पनि कसरी? सुक्खा ओठ, मुखभित्र प्रयोग हुने धारिला औजार, चिसो पानीको छर्काइ, कतै ड्रिल गर्ने मेसिनको आवाज। कतिपय मानिसहरु दन्तचिकित्सकसँग यति डराउँछन् कि उनीहरु मुखको रोग पालेर बस्न नै सहज ठान्छन्। दाँत उपचारको सुविधा हुँदाहुँदै पनि सेवा नलिइकन रोग पालेर बस्ने कारणहरुमा अस्पताल प्रतिको डर र व्याकुलता पनि पर्छ।
१) दुखाइको डर :
मानिसहरु दन्त चिकित्सककोमा नजानुको मुख्य कारण दुख्छ कि भन्ने डर पनि हो। सानो बेलामा गरेको नराम्रो अनुभव अथवा अरुको पीडा सुनेको पनि हुनसक्छ। तर, दन्तचिकित्सा क्षेत्रमा भएका थुप्रै नयाँ आविस्कारहरुले गर्दा दुखाइ नियन्त्रण गर्न सजिलो बनेको अवस्था छ।
२) सुइको डर :
धेरैजना म सुइको डर हुने गरेको पाइन्छ । सुई मुखभित्र राख्नुपर्ने अवस्थामा सुईको डर पाइन्छ। योभन्दा बाहेक सुइ दिँदादिँदै पनि काम नगर्ने हो कि भनेर पनि डर लाग्ने गरेको पाइएको छ।
३) एनेस्थेसियाको नकारात्मक असरको डर ः
केही मानिसले औषधिको नकारात्मक असरहरु जस्तै रिंगटा लाग्ने, बेहोस हुने, वाकवाक लाग्ने जस्ता डर पाल्ने गरेको पाईन्छ।
४) आफ्नो नियन्त्रणमा केही नभएर लाचार महसुस गर्नु ः अस्पतालको कुर्चीमा बसेर आफ्नो मुखभित्र के कसो भैरहेको छ भनेर जान्न नपाउँदा यस्तो सोच आउनु स्वभाविक नै हो।
५) आफ्नो निजी अन्तर गुमेको महसुस वा अप्ठेरो महसुस हुने ः
थुप्रै मानिसमा दन्तचिकित्सक मुखको नजिकै आएर उपचार गर्दा आफ्नो दाँत र मुखको बारेमा सचेत हुने, श्वास गन्हायो कि जस्तो गर्छन्। जसका कारण कारण आफ्नो बारेमा बढी सचेत भएको पाइएको छ।
डरलाई जित्न के गर्ने त ?
१) आफ्नो डरलाई चिन्नुस् :
आफ्नो डर र भावनालाई बुझ्नु र स्विकार्नु डरलाई जित्ने प्रथम सीँढी हो। आफ्नो डरहरुको विवरण तालिका बनाँउदा आफ्नो साथसाथै आफ्नो दन्तचिकित्सकलाई पनि मनको कुरा बुझाउन सजिलो हुनेगर्छ।
२) दन्त चिकित्सकलाई आफ्नो अवस्थाबारे सुचित गर्नुस् ः
दन्त चिकित्सकसँग उपचारको योजना बनाउनुभन्दा पहिले आफ्नो डर, चिन्ता, भयका बारेमा राम्रोसँग कुरा गर्नु जरुरी छ। यसो गर्नाले दन्त चिकित्सकलाई तपाईंको अवस्था बुझेर त्यसअनुरुप आफ्नो कार्यतलिका बनाउन सहयोग हुन्छ।
३) अस्पताल जाँदा कोही साथी लिएर जानुस् ः
आप्mनो साथमा साथी, परिवारका सदस्य लिएर जानुपर्छ, ताकि कुनै डर नहोस्। यसो गर्नाले आफूलाई आश्वासन र हिम्मत मिल्ने गर्छ।
४) निद्रा लगाउने औषधिको प्रयोग :
बिरामीलाई शान्त गराउन र तनाव कम गर्न निद्रा लगाउने औषधि प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ।
५) विश्राम प्रविधिको प्रयोग :
तपाईं आराम गर्न सक्ने एक तरिका भनेको नियन्त्रित सास फेर्नु हो। यसअनुसार लामो सास लिने र धेरै ढिलो बाहिर पठाउन सकिन्छ। यसले तपाईंको मांसपेशीलाई आराम गर्न र हृदय सन्चालन सुधार्न मद्दत गर्नेछ।
६) भ्रामक प्रयोग गर्ने :
उपचारको बेला तपाईंको ध्यान हटाउन मद्दत गर्ने केही तरिकाहरूमा संगीत सुन्ने, आफैंलाई गणना गर्दै गर्ने आदि पर्छन्। यसबाहेक, हँसाउने भिडियो वा आफूलाई राम्रो महसुस गराउने भिडियो हेरेर पनि आराम मिल्न सक्छ।
७) आफैलाई इनाम दिनुहोस् :
जब तपाईं आफ्नो दन्त डरमाथि विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ वा कुनै विशेष दाँतको उपचार पूरा गर्नुहुन्छ , आफैलाई इनाम दिनुहोस। मन परेको सामान किन्नुहोस् वा मन परेको ठाउँमा घुम्न जानुहोस्। यसो गर्नाले दन्त चिकित्सककहाँ गएको विषय कुनै रमाइलो अवसरजस्तै हुन्छ।
- पिजी रेसिडेन्ट, कान्तिपुर डेन्टल कलेज